Tracx: Nweta Nghọta, Nwepụta Aka, na Mmetụta Mmetụta Na Ahịa Na-elekọta Gị | Martech Zone
Corlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ịmeghe ohere nke mgbasa ozi mmekọrịta. Nyochaa aha, ịrịọ nzaghachi ndị ahịa, inye ahịa ahịa okwu ọnụ, ịkwalite ọdịnaya na onyinye, ịkụziri na ịzụlite atụmanya na ndị ahịa. Social media na-enye ya niile - nnweta, upsell, na njigide.
Vegba ọsọ nke ozi na mgbagha ejiri mee ka ndị ọzọ nwee usoro ọrụ na ụlọ ọrụ chọrọ ikpo okwu iji nyochaa, tụọ ma mepụta usoro mgbasa ozi mmekọrịta.
Ihe ngwọta Tracx na-enyocha ma na-emezi ọtụtụ data nke ala, omume igwe mmadụ na nke mmekọrịta mmadụ na ibe site na ntanetị mmekọrịta iji nye nghọta miri emi banyere ndị ahịa, ndị asọmpi, na ndị na-emetụta ihe. Mgbe ahụ, ọ na - eme ka nghọta ndị ahụ nwee ike ịrụ ọrụ site na ntụgharị Nchọpụta Nkwado Nlekọta nke Ọnọdụ, na-enyere mmekọrịta aka nke ọma nke na-eweta nsonaazụ azụmaahịa bara uru.
Tracx na-ekewa nke a ụzọ atọ dị mkpa - nghọta, njikọ aka na nha:
Nghọta - na-enyere ndị azụmaahịa aka ịchọta, ịchekwa na leverage influencers. Nghọta na-enye ndị azụmaahịa ohere ịchọta ndị na-ege ha ntị na mbara ala, na-achọpụta ebe ndị na-ekpo ọkụ ma na-enweta granular site na ịchebara hyper-mpaghara. Na n'ezie, ọ na-enyere ma ederede na visual ntị na ezigbo oge nyocha.
njikọ aka - Chọpụta ma jikwaa ọdịnaya dị ike, rụkọta ọrụ na nzukọ a, ma hazie mmelite na isiokwu dị mkpa ma lekwasị anya.
mmesho - Jikwaa ma bulie mgbasa ozi mgbasa ozi gị, chọpụta ọwa mmekọrịta dị elu, tụlee nsonaazụ maka asọmpi gị, soro nloghachi gị na itinye ego, ma tụọ ma jikwaa njirimara arụmọrụ dị n'ime.
Rịọ a Tracx ngosi!
Tags: ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụtracx